Izici zesinkwa ezinde zesikwashi nokusetshenziswa
ngu admin ngo 18-08-14
I-squishy ende yesinkwa ibunjwelwa amagwebu okokuhlaza okotshana non-enobuthi futhi okhetha imvelo. Amathoyizi ahamba kancane ayathandwa phakathi kwezingane, intsha kanye nabantu abadala e-Southeast Asia, njengaseYurophu, eMelika naseJapan, futhi aziwa kakhulu eYurophu, eMelika naseJapan ....
Indlela yokuhlanza amathoyizi ekhekhe
ngu admin ngo 18-06-16
Uma kulula ukukhiqiza amagciwane isikhathi eside, kuyingozi empilweni, futhi kubalulekile ukugcina ithoyizi lekhekhe le-squishy lihlanzekile ukuze liphile. Indlela yokuhlanza amathoyizi ekhekhe:
Amathoyizi Ayingxenye Ejwayelekile Yobuntwana
ngu admin ngo 12-05-16
Kubukeka sengathi ikhaya elinezingane ikhaya ligcwele amathoyizi. Ababelethi bafuna abantwana babe nengane enenjabulo nephilileko. Amathoyizi ayingxenye enkulu yokukhula. Kepha, ngezitolo ezigcwele amathoyizi nemidlalo abazali abaningi baqala ukungabaza ukuthi yimaphi amathoyizi afanele futhi yibaphi amathoyizi azosiza i-chil yabo ...
Kungani Amakhasimende Enjengezitolo Zezipho ezikwi-Intanethi?
Elula ukuthola izipho 1.Izitolo zezipho ezisetshenzisiwe zibonakalisa ngokucacile izigaba ngokuya ngamazinga ahlukile njengokuthandwa, izinto zokwakha, amasayizi, bobunji, njll. Izipho ezithandwa kakhulu ongazithola ezitolo zezipho eziku-inthanethi zifaka amakhandlela anephunga, izingcezu zomhlobiso, amathoyizi agxiliwe, amagajethi we-elekthronikhi ...
Isithasiselo: No.88, Miaodai Village, Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang, China